बर्दियाको बाघ-काण्ड बारेमा बन्यो यस्तो शर्ट मुभी (भिडियो सहित)
January 20, 2021 2319
कैलालीको लम्किचुहा नगर’पालिका-४ कौवापुरकी ५० वर्षीया नन्द’कली उपचार गर्न छोराको मोटर साइकल चढेर नेपाल’गञ्ज आएकी थिइन्। तर घर फर्किनै नपाइ उनी माथि बाघले झ’म्टियो।केही दिन यता छाति दुख्न थाले पछि भारतमा भएका श्रीमा’नको सल्लाहमा २२ वर्षीय छोरा सन्तोषको मोटर’साइकल चढेर चेक’जाँच गर्न हिँडेकी थिइन्। उनलाई सुगर (चिनीरोग) थियो।
नेपाल’गञ्ज आएर छातिको सिटी स्क्यान गरे। डाक्टर’लाई देखाए। उपचार सकिँदा दिन ढल्कि’सकेको थियो। नेपाल’गञ्जबाट हिँड्दा बेलुकाको ६ बजि’सकेको थियो । पुसको जाडो मोटर’साईकलको यात्रा। तै राज’मार्गमा आफ्नै गतिमा नहिँडे उल्टै प’छाडिको गाडीले ठोक्लान् भन्ने त्रा’स उत्तिकै हुन्छ। सन्तोषले सुदूर’पश्चिम प्रदेश १००८ प ६८०१ नम्बरको मोटर’साइकल हाँ’किरहेका थिए। पछाडि उनकी आमा नन्द’कली बसेकी थिइन्।
करिब साढे ३ घन्टा लामो यात्रा पछि उनी हरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरे। जंगली जनावरको सुर’क्षाका लागि निकुञ्ज भित्र चा’लकका लागि निश्चित गति नि’र्धारण गरिएको हुन्छ। निकुञ्जको निर्देशन अनुसार सन्तोषले पनि मोटर’साईकलको गति घटाए। ‘मेरो मोटर’साईकलको गति त्यस्तै ३०–३५ सम्म थियो होला,’ सन्तोषले सेतोपाटीसँग भने।
उनीहरू अम्रेनी चेकपोष्ट भन्दा ५/६ किलो मिटर अगाडि पुगेका थिए। सडकको उत्तरतर्फ अगाडि करिब १० देखि १५ मिटरको दुरीमा एक्कासी बाघ देखा’पर्‍यो। उनले मोटर’साईकल अझै स्लो गरे। ‘मोटर’साईकल फर्काएर भाग्न मिल्ने ठाउँ नै थिएन। अगाडि यति ठूलो बाघ थियो के गर्ने गर्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यहीँ बिचमा बाघ जंग’लतिर गयो। मौका छोपेर गाडी’को स्पिड बढाएर भाग्न खोजे’को तर बाघले हामीलाई झुक्या’एको रहेछ।’
त्यहीँ बेला बाघले एक्कासी उनीहरूको मोटर’साइकलमा झम्टियो। ‘ममीलाई झम्टिएर लग्यो,’ सन्तोषले भने, ‘त्यपसपछि ममीले एक पटक चिच्याएर ‘बाबू’ भन्नुभयो।’ मोटर’साईकल सडकमा ढलि’सकेको थियो। सन्तोषले पनि ममी–ममी भनेर कराए। रोए। तर उनको चित्कार बाघले सुनेन। ‘कराए’पछि ममी’लाई छोड्ला कि, भनेर म धेरै कराएँ,’ सन्तो’षले भने, ‘तर, पापीले के छोड्थ्यो, त्यो अन्धकार रात’मा कता लग्यो कता?’
सन्तोषका अनुसार बाघले सुरूमा उनैलाई टार्गेट गरेर झम्टिएको थियो। तर, उसको निसाना गुडिरहेको मोटर’साईकलका कारण चुक्यो। सन्तोषको दायाँ पट्टीको ज्या’केटको बाहुला च्यातिएको छ। ‘मलाई टार्गेट गरेर झम्टि’एको बाघले बाहुला च्या’तिपछि ममीलाई समात्यो र घिसा-र्दै लग्यो,’ सन्तोषले भने ‘मेरो होस नै भएन। के गरौं, के नगरौं भन्ने मन’स्थितिमा पुगेछु। रूने कराउने’भन्दा अरू केही गर्न सकिनँ।’
झन्डै १०० मिटरको दूरीमा पछाडि ट्रक आइ-रहेको थियो। ट्रकको ढोका लगाएको भए पनि उनी रोई-कराई गरेर ढोका खोल्न लगाए। त्यस-पछि अन्य गाडी पनि पू-र्वबाट आए। बाघले आफ्नी ममीलाई तानेर लगेको भन्दै खोजी कार्यमा सघा’उन हारगु-हार गरे। तर, त्यो निष्पट्ट अँध्या-रोमा जंगलमा छिर्न कसैले साहस गरेनन्। गाडीबाट ओ-र्लनै डराए।
बरू ट्रकका मानि’सले मोटर-साईकल उठाउन र चाबी निकालेर राख्न सल्लाह दिए। अरू सवारी साधनमा मानि’सले सुर’क्षाको कारण सन्तोषलाई पनि त्यहाँ नबस्न सुझाए। गुडिरहेको मोटर-साईकलबाट मान्छे तानेर लाने नरभक्षी बाघको के विश्वास? सबैको सल्लाहमा सन्तोषलाई स्का-र्पियोको मानिसले ५/६ मिटर पूर्वको अम्रेनी चेक-पोष्ट’सम्म पुर्‍याउन सहयोग गरे।
निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटि’एका सुरक्षा-कर्मीलाई सन्तोषले सबै घटना विवरण सुनाए। उनी-हरूले खोजीका लागि जान्छौं भनेर सन्तोष-लाई शान्त्वना दिए। तर, खोजी’मा गए नगएको उनले थाहा पाएनन्। रात-भर सन्तोष निदाउन सकेनन् । उता घरमा सन्तो-षकी श्री’मती चन्द्रा सुत्केरी थिइन्। उनको ९ दिन अघि मात्रै छोरा जन्मिएको थियो। सुत्केरी श्रीमती घरमा एक्लै थिइन्। साथमा मोबाइल नभएका’ले सन्तो-षले घरमा खबर पनि गर्न पाएनन्।
शनिबार उज्या’लो भएपछि बाघले झम्टिँ’दा दुर्घट-नामा परेको मोटर-साईकल चेक पोष्टमा राखेर सुरक्षाकर्मीसँग आमाको खोजी गर्न गए। खोजी गर्दा श-निबार मध्यान्ह १२ बजेतिर मात्रै नन्दकलीको शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला पर्‍यो। अनुहार र दुबै तिघ्राको फिला बाघले खाएको थियो। देब्रे खुट्टा बाघले शरी-रदेखि अ’लग पारे-को अवस्थामा थियो। त्यो सबै सन्तो-षले हेर्न पनि सकेनन्।
आफ्नै आमा’को शरिर क्षत’विक्षत अवस्थामा देख्दा सन्ता-नलाई कस्तो हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ? ‘कल्पना नगरेकै घ’टना भयो, मैले यस्तो होला भनेर कहिलै सोचेको थिइनँ,’ सेतो-पाटीको फोन सम्पर्कमा सुँक्क सुँक्क गर्दै सन्तोषले भने, ‘ममीलाई धेरै समय बचाउन उपचा-रका लागि अ-स्पताल लगेर गएको थिएँ, ‍बाटोमै बाघको निशानामा पर्दा ममीलाई गुमाउन पुगेँ।’
‘बाघले झम्टिएर लतार्दै लैजाँ’दा ममीले ‘बाबु’ भनेर गरेको पुकारले म अझैं झस्किरहन्छु,’ सन्तोषले भने, ‘आमाको त्यो चित्का-र म कहिलै भुल्न सक्दिनँ। त्यो मेरो का’नमा गुन्जिरहेको छ।’ लम्किबाट प्लसटु उत्तिर्ण गरेका सन्तोष घरको आ’र्थिक अवस्था र साहुको ऋण तिर्न भारत जाने तयारीमा थिए। तर, घरमा श्रीमती चन्द्रा दुई जिउकी भएकाले केही समय’पछि जाने निर्णय गरेका थिए।
‘मेरो घरको मुल गार्जेन नै आमा हो,’ सन्तोषले भने ‘बुवा र दिदी रोजगारीका लागि इण्डिया बस्ने हुँदा घर व्यवहार सबै ममीले नै चलाउँदै आउनु भएको थियो।’ नन्दकलीका श्रीमान नरेन्द्र दसै तिहार मनाएर मंसिर ८ गते मात्रै इण्डिया गएका हुन्। उनी हरिया-णास्थित एक कम्प-नीमा काम गर्छन्। घर बिदामा आएका उनलाई मालि-कले छिटो आउन ताकेता गरेप-छि आफू फर्किएको उनले बताए।
‘साहुको ऋण तिर्नुछ, हामी-लाई घरमै बसेर कहाँ पुग्छ, म पनि बिरामी छु, जानुहोस् भनेर बुढीले नै पठाएकी हुन्,’ नरेन्द्रले सेतोपाटीसँग भने, ‘छोरी र म इण्डियामै बसेर मज-दुरी गरि घर खर्च पुर्‍या-उँदै आएका छौं।’ घर सल्लाह अनुसार नै नन्दकली उप-चार गर्न छोरा-सँग नेपालगञ्ज पुगेकी थिइन्। त्यो दिन (पुस १७ गते) दिउँसो १२ बजेतिर नरेन्द्रले श्रीमती नन्दक-लीलाई फोन गरेका थिए।
‘फोनमा उनले टिभी निस्के-को रहेछ भनिन्,’ नरेन्द्रले उनीह-सँगको संवाद सम्झदै भने,‘टिभी अरू रोग-जस्तो ठूलो होइन, नियमित औषधी खान नभूल्नू ठिक हुन्छ भनेर सम्झाएको थिएँ।’ त्यतिबेला नन्द-कलीले म रोगी भएँ। तपाँई कसरी खर्च पुर्‍याउँनु हुन्छ? मलाई जति गरे पनि औषधी नलाग्ने भयो? ऋण कसरी चुका-कउनु हुन्छ भनेर चिन्ता गरेकी रहेछिन्।
घरमा सुत्के-री बुहारी र नातिको राम्रो ख्याल गर्न आग्रह गर्दै नरेन्द्रले जवाफमा उनलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरेका थिए। उनले तलब बुझे-पछि केही पैसा पठा-उनेसमेत बताएका रहेछन्। अफ-सोच त्यहीँ संवादनै नरेन्द्रले आफ्नी श्रीमति-सँग गरेको अन्तिम कुराका’नी हुनपुग्यो। एकाएक शुक्रबार राति साढे १२ बजेतिर इण्डि’यामै बस्ने नरेन्द्र-का साला वीरेन्द्र थापाले आफ्नी दिदी-लाई बाघले तानेर बेपत्ता पारेको खबर दिए।
उनले विश्वासनै गर्न सकेनन्। औ’षधि गर्न प-ठाएकी श्रीमतीलाई बाघले तानेर लग्यो भनेर उनले कसरी विश्वास गर्न सक्थे र। उनले सन्तोष र श्रीमती नन्दक-लीलाई फोन सम्पर्क गर्न खोजे। तर दुबैको फोन स्वीच अफ थियो। रातभर प्रया’स गरे फोनै लागेन। घ’रमा ९ दिनकी सुत्केरी बुहारीको मोबाईल थिएन। अन्यौं’लका बीच छटपटाई रहे।
त्यहीँ अन्यौंल बीच नरेन्द्र राति नै नेपाल फर्कने निर्णय गरे। तर भनेको समयमा गाडी पाएनन्। ‘रातभर बस’पार्कमा छटप-टाउनुपयो। कतिखेर होस उडेझैं भयो,’ नरेन्द्रले भने, ‘अन्धकार रात र विरोनो मुलुकमा सम्हालिनुको विकल्प थिएन। छोरा बुहारी’को मुहार याद आउँदा र जीवनप्रति आशा जाग्थ्यो।’
शनिबार बेलुका नरेन्द्र घर आउँदा उनकी पन्ती नन्दक’लीको चिता तयार भइरहेको थियो। उनले श्रीम’तीलाई अन्तिम श्रद्धा-ञ्जलीचै दिन भ्याए।‘मैले त जी’वनको साहारा नै गुमाए। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा मोटर’साईकलमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगा-उनुपर्छ। ताकि, म जस्तै अरूले जीवनसाथी गु’माउनु नपरोस्,’ उनले भने।
मृत’कका घरमा दुई छाेरी र कान्छा एक छाेरा हुन्। ती महिलाकाे पहिले पनि अर्को बिहे भएकालेे त्यताबाट दुई छाेरा थिए। अहिले तीन भाइ र दुई बहिनी आमाकाे अन्तिम का’र्यका लागि ल’म्किचुहा ४ काे घरमा बसेका छन्। नारायण खड्काले लेखेको यो खबर लाई सेतोपाटिबाट सा’भार गरिएको हो ।
यो घटना सँग सम्बन्धित फ्लिम अहिले युटुबमा भाइरल बनेको छ । हेर्नुहोस् उक्त चलचित्र..
Prevएक दिनमै ८ छाक खाने सर-कारी कर्मचारी..
Nextअन्ततः रवि लामिछानेले छाडे न्यूज २४ टेलिभिजन (भिडियो सहित)
दक्षिण कोरियाको एक भवनमा आगो:लागी हुँदा ३८ को मृ:त्यु (भिडियोसहित)
धेरै फिल्ममा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको आमा बनेकी लक्ष्मी गिरीले श्वेता खड्कालाई यस्तो भनिन् (भिडियो हे’र्नुस)
नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस् तालिका सहित
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (65015)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (62430)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52155)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50923)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (50845)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46636)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (46622)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41481)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (38716)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33822)
डाक्टर बहिनी धुरुधुरु रुदै मिडियामा, बिरामि बा-आमाका लागि दाइसँग गरिन् यस्तो बिन्ती (भिडियो)
गायिका कल्पना दाहाललाई के भयो ? एकाएक रुदै’रुदै आइन् (भिडियो हेर्नुस्)
अन्ततः रहेनन् कन्चन, लाख कोसिस गर्दापनी बचाउन सकिएन’…(भिडियो सहित)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज, सर्वोच्चले दियो नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई
साउदी गएका छिरिङ बाकसमा फर्किए, श्रीमती र बाबाआमाको रुवाबासी (भिडियो सहित)